Daawo: Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay dallka Guinea | Sagal Radio Services
Shir jaraa’id oo uu saacado ka hor ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu sheegay in Guinea ay ku xadgudubtay Qaranimada iyo Midnimada Umadda Soomaaliyeed.
“Waxaan umadda Soomaaliyeed la socodsiineynaa in Laga bilaabo saacaadaan ay dowladda Federaalka ay xiririka u jartay dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Guniea oo ay caasimadiisa tahay Konagry”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Waxaa uu sheegay in sababata ay xiriirka ugu jareen ay tahay inay meel ka dhaca ku sameeyeen qaranimada, midnimada iyo wadajirka Umadda Soomaaliyeed, isagoo farriin u diray dalal dhowr ah oo xadgudubyo ka dhan ah ku ah qaranimada iyo Midnimada Soomaaliyeed.
Xiriirka ay u jrtay dowladda Soomaaliya dalka Gunie ayaa ka dambeysay markii maalin ka hor Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi loogu soo dhoweeyay dalkaas maqqaam heerkiisu sareeyay, iyadoo ay muuqato in dowladda Federaalka Soomaaliya arrintan ka carootay.
Halkan hoose ka daawo Shirka jaraa’id.